Hal-beegga Cawaanimada – Kaasho Maanka
Ereyga cawaan waa erey af-qalaad ah lagana yaabo inuu ka micno duwan yahay sida soomaalidu u adeegsato, ereygan soomaalidu waxay adeegsataa markay cid ama qof liidayaan kuna liideyaan muuqiisa, aragtidiisa diimeed iyo hab-dhaqankiisa bulsho, taana waxayaabo badan baa dhaliyey oo jahligu kow ka yahay.
Soomaalidu waxay cawaan u taqaan dadka diirka madaw ee ay ka midka yihiin, waxay sidoo kale cawaan u taqaan dhammaan dadka haysta diimaha kale ama diinlaawayaasha ah ama dadka aan haysan dhaqan soomaaliga ee iyaga ka duwan. Hadaba saw muhiim ma aha in aan soomalida lafteeda eegno sidoo kalana bulshooyinka ay liideyaan ee cawaanka u yaqaaniin aan barbardhigno diinta iyo dhaqanka soomaalidu inta badani ay haysato.
Muslim dhagax maamuusaya (credit: AP)
Qofka soomaaliga ahi marka uu cawaan ku sheegeyo dadka aaminsan diinta Buudhiisamka ee dhagaxa caabuda wuxuu hilmaansan yahay ama indhaha iska qabanayaa inuu sannad walba ku bixiyo kumanaan doolar siduu usoo booqan lahaa uguna soo wareegi lahaa dhagaxa loo yaqaan Kabcada, sidoo kalena uu taallo halkaas ka dhisan dhagax ula dhici lahaa isagoo aaminsan wax aan la arkayni inay ku xidhan yihiin ama laba buurood marba dhinac u ordo isago aad moodo qof aan maankiisu fayoobayn.
Qofka soomaaliga ahi wuxuu hilmaansan yahay inuu ogol yahay agtiisana ay caadi ka tahay dadka in dhagax lagu dilo, gacmaha iyo lugaha isdhaaf loo gooyo, caruurtana la guursan karo, wuxuu aaminsan yahay in Maxamed dameer baalal leh uu samada sare ku tegey oo ilaahayna uu kulan midho dhal ah lasoo yeeshay, wuxuu raali ka yahay is-addoonsiga, dhaca iyo kufsiga lagula kaco dadka aan ku diinta ahayn, wuxuu kaloo aaminsan yahay in aanu afrikaan ahayn oo afrikaanku agtiisa cawaan bay ka yihiin.
QORMO LA XIRIIRTA: Goorma ayay laab la qaawiyaa danbi noqotay?
Wuxuu aad ula yaabaa hab-dhaqanka kala sarraynta dabaqadaha ee diinta Hinduuska (Caste system) wuxuuna hilmaama cunsuriyadda iyo takoorka uu ku hayo qayb dhan oo bulshada soomaaliyeed ka mida, wuxu kaloo aaminsan yahay carabi inay dadka ka mudan tahay carabna uu yahay.
Wuxuu aaminsan yahay quraanku inuu ka saxan yahay kitaabka qudduuska ah (Bible), caddaynta keliya uu haystaan waa in ay ku qoran tahay kitaabkiisa, soomaaliya wuxuu rabaa in diinta lagu xukumo isaguse wuxuu rabaa inuu wadamada cawaanka ku noolaado.
Wuxuu aad u neceb yahay kala duwanaanshah fikirka, wuxuuna aaminsan yahay qof kasta oo soomaali ah ha ahaado masiixi diin-laawe ama shiici in aanu soomali ahayn dalkana aanu xaq ku lahayn maadama uu diintiisi iibsadey (sida uu aaminsan yahay) lacagna uu siistay wax walaba in la iibsan karo ayaa ka dhaadhacsan, diinta ayuuna ka horreysiiyey soomaalinimada.
Soomaalidu waa dad qaawan oo arradan hadana aaminsan in dhar aanay sidan laga xadayo.
Haddaba saw ma muuqato halbeegga aan ku eegeyno ama ku qeexeyno cawaannimada inuu qaldan yahay, saw baahi wayn uma qabno in aan saxno halbeegga aan ku eegeyno cawaannimada oo aan is waydiino yaa cawaan ah? maxaa cawaan lagu noqdaa? Ma haboontahay ereygan in aan adeegsano? Waydiimahan iyo qaar kaloo badani waa kuwo soomaali oo dhan u yaal mana jirto wax ay kaga haboontahay in aan is aqbalno soona dhoweyno kala duwanaansha dhan walba ah waayo kala duwanaanshuhu wuxu ka mid yahay waxyaabaha aadane ama dad inaga dhiga, ma nihin aalad (robot) shirkadi soo saaratay oo isku wada mid ah.
Waxaa habboon in aan is ogolaanno maadaama ilaaha aad aaminsan tahay magacuu doono ha lahaadee aanu soo degeyn ama godka kasoo baxayn si uu markhaatigaaga kuugu furo inaad saxsan tahay.Waa in aan ogaanaa kala duwananshuhu inu qurux yahay oo aan is aqbalnaa horena u soconaa sidoo kale waa inaad ogaataan cayda iyo habaarku in aanay waxba kuu tarayn, murti soomaaliyeed baa ahayd “Adhi la’laaya adhi la’ laayuU leeyahay”.
Waxa ay soomaalida qaarkood sheegaan in ay soomaalidii hore ahaayeen dad doodaha iyo xubinta hadalka hela oo garaha iyo arrimaha geed hoostiis ku dhammaysta, laakiin ay ummaddu gadaal ka soo xumaadeen. Sidaas in ay ahaan jirtey shaki weyn baa ku jira oo in ay dadka wax u kordheen mooyi ee wax in ay ka lumeen i la ma aha. Anigu waxa aan ahay reer miyi, baadiyahana in sidii ay dadku ahaan jireen ay...
Ma boqorro beelahooda la joogaybaa mise rusul aadanaha loo dirray!
W/Q: Kaasho Maanka
Qaybta: Aragtiyo, Diinta Yuhuudiyadda, Sooyaal
aa’ud waxa uu dhalay Suleymaan, Zakariye waxa uu dhalay Yaxye, Haaruun waxa uu la dhashay Muuse. Dhammaantood waa hal qoys kana wada yimid hal deegaan xitaa Ciise. Nabi Muxamed waa faracii Ismaaciil sida ay ku doodaan muslimiintu. Maxaad ku macneyn laheyd wiil iyo aabihiis, awoowgiis iyo abkowgiisa oo wada rusul ah oo guri kuwad shaahaya oo dunida daafaheedana diin la’aani ka jirto. Maxay macna...
ablaha waxaa loo diyaariyaa markay yar yihiin inay ka fogaadaan caqabadahaa iyo dhibaatooyinka nolosha, waxaa loo sheegaa inay qoslaan, si nabad ah wax ku xalliyaan, waxbarashada ay si xeeladaysan u wataan oo dhibco fiican keenaan. Dhanka kale, wiilasha waxaa la baraa inay adkaysi yeeshaan, inay dhibaatooyinka u dhabar adaygaan, xitaa kubbadda inay si aan naxariisi ku jirin u ciyaaraan oo geed...
Erayga “macno-darrada sharka” waxa suuqa fikirka si weyn u soo galisay faylasuufad yahuudiyad ah oo lagu magacaabi jiray Hannah Arendt taasi oo macno darro ku tilmaantay in lala xisaabtamo nin ka mid ahaa Naasiyiintii xasuuqay yuhuudda oo ay ku difaacday in uu ahaa qof caadi ah , la maandooriyay , la askareeyay heer uu waayay awooddii fikirka ama waxa qudha ee uu ku fikiri karaa noqday fulinta...
”Male” iyo ”dhab” waa labo erey oo afkeenna duugga ah ka mid ah, lagana yaabo in macnnehoodu uu luqad kasta ku jiro, laakiin labadaas kalmadood midkee buu macnihiisu horumarka nolosha u fiican yahay?Waxaa su’aashaas ka horraysa ”Horta ma ay fiican tahay in la horumaro mase waa ay xun tahay?”. Sida ay dadkeennu u dhaqmaan oo ka muuqata haddii la daliishado waxaa caddaanaysa in uu horumarku xun...
W/Q: Khaled Hassan 25th June 2018